အဖေနှင့်သား ပြောတဲ့စကား — Steemit
တစ်နေ့၌ အဖေ အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေစဉ်တွင် သူသား လာပြီးတော့ မေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ်၊ အဖေ.. သားမေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလား၊ အဖေက ရတာပေ့ါသားရယ် ဘာမေးမှာလဲမေးပါ၊ ဒါနဲ့ သားက အဖေ တစ်နာရီးကို ငွေဘယ်လောက်ရလဲ၊ အဖေက နည်းနည်းစိတ်ကောက်ပြီးတော့ ဖြေလိုက်ပါတယ် ဒါကမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ နောက်ပြီးတော့ မင်းဘာကြောင်း ဒီမေးခွန်းကိုမေးခဲ့တာလေး၊ သားကလည်းဘဲဖြေခဲ့ပါတယ်၊ သားသိချင်တာတစ်ခုတည်းပါ၊ အဖေ ဘယ်လောက်ရသလဲဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ပြောပေးပါအဖေ၊ ဒါကြောင်းအဖေက တစ်နာရီကို Rs 500 ရပါတယ်ဆိုပြီးဖြေခဲ့ပါတယ်။
Oh! သူရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အတူ တစ်ခုလောက်ပြောပါမယ် အဖေ သားကို Rs 300 လောက်ချေးလိုရမလား၊ ဒါနဲ့အဖေက အပြင်အထန်ငြင်းဆိုပြီး ကစားစရာတွေဝယ်ဖို့အတွက် ငွေလာတောင်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ အိမ်ပြန်ပြီးသွားနားလိုက်တော့ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ဒါအပြင်မင်းစဉ်းစားကြည့် ဘာဖြစ်လိုဒီလောက်တောင် စိတ်ဓာတ်တွေမကောင်းရတာလဲ၊ ငါနေ့တိုင်းအလုပ်ပင်ပင်ပန်းပန်လုပ်နေတာ၊ ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်မှု့တွေကို ငါမကြေိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်၊
ဒါကြောင်း သားက အိမ်ပြန်ပြီးတော့ တံခါးကို loock ပိတ်ထားပြီးနေခဲ့ပါတယ်၊ အဖေဖြစ်သူက သူသားရဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတောမကျေမနပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်၊ ငွေလိုချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ မေးခွန်းတွေလာမေးတာ ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းသလဲကြည့်စမ်းကြည့်စမ်း။
နည်းနည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့ အဖေဖြစ်သူက စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်တဲ့၊ သူတကယ်လိုအပ်နေတာလား Rs 300 သူတစ်ခါမှ ငွေမတောင်းခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါနဲ့ အဖေက သူသားအခန့်ကိုသွားပြီးတော့ တံခါးကိုဖွင့်ပြီး သားဆီကို ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်၊ သား မင်းအိပ် နေပြီးလား? မအိပ်သေးဘူး အဖေ သားက အနိုးပါ၊ အဖေဖြစ်သူက ငါးစဉ်းစားပြီးပြီးသား မင်းကိုငါပြောခဲ့တာတွေက နည်းနည်းများသွားတယ်၊ စောစော မင်းကိုဒေါသထွက်ပြီးပြောမိလိုက်တာပါ၊ ယော မင်းလိုချင်တဲ့ Rs 300. သားကအိပ်ယာကနေထလာပြီးတော့ ကျေးဇူးပါဖေဖေ၊ သားကတော့အရမ်းပျော်နေတာပေါ့၊ ပြီးတော့ သား သူ့ရဲ့ခေါင်းအုံးအောက်က Not စာအုပ်ကိုယူလိုက်ပါသေးတယ်၊ ဒါနဲ့ အဖေက သူသားဆီမှာ အရင်ကတည်းက ငွေရှိနေတာကို မြင်တော့ နောက်ထပ်ဒေါသထွက်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့၊၊
သားက သူ့ရဲ့ငွေကိုယူလာပြီးတော့ သူ့အဖေကိုကြည့်စမ်းအဖေ၊ အဖေကတော့ မင်းမှာ အရင်ကတည်းကငွေရှိနေပါလျှက်နဲ့ ဘာကြောင်းနောက်ထပ်ငွေလာတောင်းတာလဲ၊ သားက သားမှာငွေမလှုံလောက်လို့ပါ၊ ဒါပေမဲ့ခုတော့ ရသွားပြီးဆိုပြီးပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်၊ အဖေ သားမှာခု Rs 500 ရသွားပြီး၊ ဒါကြောင်း အဖေရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကိုသားဝယ်လို့ရနိုင်မလားလို့ပါ? ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မနက်ဖန် အိမ်းကို အလုပ်ကနေစောစောပြန်လာခဲ့ပါ၊ သားအဖေနဲ့အတူ ညနေစာစားချင်လို့ပါ၊ အဖေက ဘာမှပြောမထွက်ဘဲ ဆွံအသွားခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ပုံပြင်လေးကတော့… ဒီစကားလုံးတစ်လုံးက ဘဝမှာ အလုပ်တစ်တည်းကိုသား အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေအားကို သတိပေးလိုက်တဲ့စကားလှလေးတစ်လုံးပင်တည်၊ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးပါတဲ့ မိသားစုနဲ့အချိန်ကိုမသုံးဖြုန်းတီးဘဲနဲ့ လက်နဲ့မကွာအလုပ်တစ်ခုတည်းမှာဘဲ ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးသင့်ဘူး၊ မိသားစုတွေက ကျွန်တော်တို့ကို မုန်းမေ့သွားပါလိမ့်မယ်၊ တကယ်လို့များ မနက်ဖန် ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့ Company က လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် နောက်တစ်ခုအစားထိုးသွားပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာ ကျွန်တေ်ာတို့ချစ်ခင်တန်ဖို့ထားတဲ့မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေက အသက်ရှင်သန့်ဖို့ အခက်ခဲ့တွေနဲ့ ကျန်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်၊ သေချာ စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အချို့တော်တော်များများက မိသားစုတွေထက် အလုပ်မှာဘဲ အာရုံးအမြဲစိုက်ပြီးလုပ်နေတတ်ကြပါတယ်၊။
အောက်ဖော်ပြပါ English story ကနေ ဘာသာပြန်ထားသည်
ရွယ်ရည်ချက် မိသားစုတွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုမိုး အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် သားသမီးရှိတဲ့မိဘတိုင်းနားလည်နိုင်ကြပါစေ...
မှုရင်း <<< https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.vd.moralstories&h=ATNutiwn3RaByk6ESZmBKkmzfAahY6l7T6xjCugvh1xTlPk9G9KLWvCO1XYP9WoqsROKucBu5i8OINZX6iLry8qPtcFdQhF4DKRRMHCYwItyqP6bmX4&s=1
မှတ်ချက် ဒီlink သည် fb ကမဟုတ်ပါ စာအုပ်တာဖြစ်ပါသည် link ယူရရန် လွယ်ကူအောင်လို ကျွန်တော် Fb acc သို့ပြောင်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ဒီlink က စာအုပ်ဖြစ်နေသောကြောင်း ရှာရခက်ပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင်း လွယ်ကူးစေရန် ဖော်ပြပေးပါမည် စာအုပ်ထဲတွင် Family ခေါင်းစဉ်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် နိုပ်လိုက်ပါ ပြီးတော့ Father son co..,ကိုနိုပ်လိုက်ပါ
Translated by Konyi
#family #important #articles #esteem
အချိန်ကိုမဝယ်ယူနိုင်လို့ အလုပ်ဖိလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် သတိပြုမိနိုင်စရာတွေပေါ့
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ bro
အကို စာကိုဖတ်ရတာ ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကို
ပုံပြင်လေးက ပညာပေးလေးနဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
Admin တချို့က ပုံပြင်တွေ သိတ်မရေးစေချင်ဘူးတဲ့ဗျ
မိမိအမြင်သဘောထား များများပါအောင် ရေးဖို့လိုမယ်နော်
သဘောက ကဗျာဆိုလဲ ကဗျာမတင်ဖို့တားရတာက ကဗျာဆရာတွေ အကုန်ဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ။
ဟုတ်အကို ဒီတခါတော့ ဒီလောက်လေးဘဲပေါ့bro ဒီနေ့ pro နှစ်ပုဒ်ထိရေးရတော့ နည်းနည်းမောသွားပီ နောက်ဆိုထည့်ရေးပေးပါမယ် ကျေးဇူးနော် bro
မိသားစုဆိုတာလဲ အလုပ်ကြီးဘဲမဲနေရင် ပျော်ရွှင်မှုလေးတေ ပျောက်ဆုံးသွားတာကို ခံစားမိပါတယ်ဗျ
All right bro! ကျေးဇူးပါနော်
မှန်တယ် bro ဒါကြောင်း သတိပေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးမို့ အကျိုးရှိစေရန် ဖော်ပြပေးထားတာပေါ့ bro ကျေးဇူးနော်
Personal နဲ့ professional မျှတအောင်နေပေးဖို့လိုတာ သ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
အ​ရေးအသား အချက်​အချ အကွက်​ချ ​နေရာယူတာ​တွေ တိုးတက်​လာပြီ ဖက်​လို့​ကောင်းတယ်​ ကိုညီ​ရေ good
ဖတ်ဖူးပါတယ်။ဆင်တူတာလေးတွေပေါ့ ကွဲပြားစွာတင်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ရသတစ်မျိုးထပ်ရပါတယ်။
အကိုအယ်ဒိုးရယ် အားရှိသွားပီ ကျေးဇူးနော်
Very nice story for everyone
ငွေနောက်လိုက်နေရင်း ကိုယ့်နားကလူတွေကို ဂရုမစိုက်မိလောက်အောင် ဖြစ်ဖူးတယ်
သိပ်မှန်တာပေါ့bro လောကမှာ အလုပ်ထက်မိသားစုကို ပိုပြီးအချိန်ပေးသင့်ပါတယ်